Siday ay sheegayaan dadka ku nool Degmooyinkii sida sharci darada ah loogu daray Kililka Canfarta ee galbeedka gobolka Sitti ayaa waxaa ku soo biray arimo ku cusub dadka deganka arrimahaas oo ah in ay dawlada Ethiopia keentay wax dadkii iyo duunyadiba ku abuuray naxdin iyo argagax ka dib markii lagu soo daabulay ciidamaddi Milatariga oo aad u habaysan oo ay dadka degaanku walikood arkin ciidan iyo hub intaa leeg.
Goobaha la keenay Ciidanka waxaa la yidhaahda HOOYAALE waxayna ku taal ama ka dirsan tahay galbeedka degmooyinka Errer iyo Shiniile waana meelihii ay maamulka Kililka Canfartu ku sheegi jireen ay marin doonaan Xadka dhulka ay rabaan in ay qadaan.
Wararku waxay sheegaan in ciidamada ay la socdaan Diyaarado nooca loo yaqaan Helikopter iyo baabuur waawayn oo midab cas leh kana duwan kuwi horey loogu yiqiin Ciimada Ethiopia waxaa kalo la socda dad shicib ah oo dhashay dalka Shiinaha.
Dadka deganka waxaa loo sheegey in ay dhulkan ka guuraan laakiin looma sheegin meel ay guuraan iyo sababta looga rari degmooyinkooga,Diyaaradahan iyo baabuurtan waxay xoolihii iyo dadki xoola dhaqadada ahaaba ku rideen baqdin iyo kala carar masuulin ka socta maamulka canfarta oo Soomaali iyo canfarba leh waxay dadka u sheegeen in dhulkan lagu rikibi doono Gantaalayaal waawayn laguna tijaabin doono buuraha ku yaal deganka sida daraadeedna ay haboon tahay in ay goobtaan ka guuraan.
Buuraha lagu tijaabin hubkan waa dhul ay dad iyo duunyaba ku nool yihiin ee maaha dhul lama degaan waa dhul ay ka qotan yihiin ceelal ay xooluhu ka cabaan iyo daaqsin iyo tuulooyin yar yar oo dadkii abaaruhu naafeeyeen ay degan yihiin.
Wararku waxaa kaloo ay intaa ku dareen in ay wali isku mari la,yihiin dadka deganka iyo maamulka Canfartu sidii loo dhaqan galin lahaa wixii lagu sheegey saxeexi magaalada Hawash iyo qodoba ku jiray oo ila maanta Hal qodob laga dhaqan galin waxaana maalmihii la soo dhaafay laga taagay magaalada Cundhufa calanka kililka Canfarta oo shuruud looga dhigey dadka deganka in marka calanka la taago ka dibna loo gudbi doono dhaqan galinta qodobadi lagu heshiiyey laakiin haday dawladi Ethiopia ee dhulka sheegan jirtay in ay iyaduu xukuntu ay soo fara galin arinta qodoba lagu heshiiyey way adkaan doonta in ay canfar iyo ciise ku heshiiyaan xaalada maanta joogta.
——–kala socta XeerNews24.com kolba wixii ku soo bira—
Ururka Xamaas ee reer Falastiin oo Israel ku Eedeeyey in Dishay Khabiir Drones... Daawo reer Hargeysa Markay dalka Masar joogan siday u Hadlaan